D.MAGIC ၏ လိုက်နာရန် နှင့် စည်းကမ်းများ
8elements ၏ဝန်ဆောင်မှုမှကြိုဆိုပါတယ်။ ကျွန်ုပ် တို့ ၏ ဝန်ဆောင်မှုများထဲ မှ တစ်ခုကို ဝင်ရောက် အသုံးပြု သည့်အတွက် အင်မတန် ဝမ်းသာမိပါတယ်
ဝန်ဆောင်မှုကို မရယူရသေးပါက အခုဝင်မယ်!
ဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဖော်ပြပါစည်းကမ်းများကို သဘောတူပါသည်။ဝန်ဆောင်မှု အတွင်းရှိ အကြောင်းအချက်အလက် များသည် မှန်ကန်၊ တိကျ၊ နောက်ဆုံးရ ဖြစ်ရပါမည် ဟု 8elements မှအာမမခံပါ။ အကြောင်းအရာအချက်အလက်တို့သည် ကြို တင် သတိပေးနိုင်ခြင်းမရှိပဲ အချိန်မရွေးပြောင်းလဲနိုင်သည်။ အချို့ ဂိမ်း (သို့) အကြောင်းအရာများသည် နိုင်ငံ အချို့ တွင် ရနိုင်မည် မဟုတ်သလို ပုံစံ နောက်တမျိုး ဖြင့် ရယူနိုင် လို့ရချင်ရနေမည် ဖြစ်ပါသည်။အစွန်းဆုံ ဆုံး ဥပဒေ အတိုင်း ဝန်ဆောင်မှုပါ ဂိမ်းနဲ့အကြောင်းအရာ များနှင့်စပ်လျှင်းပြီးဖြစ်ပေါ် လာသမျှသော ကိစ္စ အားလုံး နှင့် အငြင်းပွားမှု များအတွက် 8elements နှင့် သက်ဆိုင်သော လိုင်စင်ပိုင်ရှင် များ၊ ဒါရိုက်တာ အဖွဲ့ ဝင်များ၊ ဝန်ထမ်းများ နှင့် အခြား ကိုယ်စားပြု လူပုဂ္ဂိုလ်၊အဖွဲ့အစည်း များက တာဝန်ရှိ ခြင်းမရှိစေရပါ။
ဝန်ဆောင်မှု ပါ ဂိမ်း နှင့် အကြောင်းအရာ များ အတွက် ရယူရန် နှင့် ဒေါင်းလုဒ် လုပ်ရန် အခကြေးငွေ ကို ဖေါ်ပြပြီဖြစ်ပါသည်။ ထို အခကြေးငွေ ကို သင်၏မိုဘိုင်းလ် ဖုန်းဘေလ်မှ ဖြတ်တောက်မည် ဖြစ်သည်။
အာမခံ ခြင်း နှင့် ကိုယ်စားပြုခြင်းမရှိခြင်း
ဝန်ဆောင်မှုပေါ်ရှိ ဂိမ်း နှင့် အကြောင်းအရာ များသည် 8elements မှဝန်ဆောင်မှုပေးထားခြင်း ဖြစ်သော်လည်း ၎င်းတို့ နှင့် ပတ်သတ်သော ရောင်းဝယ်ဖေါက်ကားမှု၊ ခိုးယူခြင်း ဆိုင်ရာ များ၊ ဉာဏ ပိုင်ဆိုင်မှု ကူးယူခြင်း စသည်ဖြင့် အာမခံ ခံချက်များ ရှိခြင်း မရှိခြင်း သည် သက်တိုင်ခြင်း မရှိကြောင်း ကို ဥပဒေအရ ဖော်ဆောင်ပြီးဖြစ်ပါသည်။အကြောင်းအရာ များ သည် အမှန်အကန် ဆုံးဖြစ်သည်ဟု မှတ်ယူထားသော်လည်း အမှားအချို့ ပါဝင် နေနိုင်ပါသည်။ ဤဝန်ဆောင်မှုပေါ်တွင် 8elements မှ ထိန်းချုပ်ထားခြင်း မရှိသော အပြင် ဆိုဒ် များ သို့သွား သည့် လင့်ခ် များပါရှိပါ သည်။သို့ပါ၍ ထို ဆိုဒ်များ အတွင်း ရှိ အကြောင်းအရာ များ ကို 8elements မှ တာဝန်ယူခြင်း မရှိပါ။ 8elements မှနေ၍ ထိုလင့်ခ်များ ကို သင်၏ ဖျော်ဖြေ မှု အတွက်သာ ထည့်ပေးထားခြင်း ဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့ကို အာမခံ သည်ဟု မဆိုလိုပါ။
8Elements လီမိတက် နှင့် ၎င်း၏ လုပ်ငန်းခွဲများ အားလုံး ၏ ဝန်ဆောင်မှုနှင့် ဂိမ်း အကြောင်းအရာများ ကို အသုံးပြုသူ အားလုံး လိုက် နာရန် စည်းကမ်းများကို www.8elements.net တွင်ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။ဤဝန်ဆောင်မှု ကို ရယူပြီး အသုံးပြုခြင်း ဒေါင်းလုဒ်ပ် လုပ်ခြင်း အားဖြင့် လိုက်နာရန် စည်းကမ်းများကို ဖတ်ရှုလေ့လာ နားလည်သဘောတူပြီးဖြစ်သည်။ဤဝန်ဆောင်မှု ကို ရယူပြီး အသုံးပြုခြင်း ဒေါင်းလုဒ်ပ် လုပ်ခြင်း အားဖြင့် 8elements မှ သတင်းအချက်အလက်ပေးပို့ ခြင်း နှင့် အရောင်းဆိုင်ရာ စာတို ပေးပို့ခြင်းကို လက်ခံပါသည်။
တယ်လီနော မိုဘိုင်းလ် ဝန်ဆောင်မှု အသုံးပြုသူ လိုက်နာရန်
တယ်လီနော် အသုံးပြုသူ လိုက်နာရန် အပြည့်အစုံကို လက်ခံ ကြောင်း ထပ်မံ သဘောတူပါသည်။ http://www.telenor.com.mm/ တွင်လိုက်နာရန် များကို လေ့လာနိုင်ပါသည်။
The D.MAGIC Club ဝန်ဆောင်မှု ၏ လိုက်နာရန် စည်းကမ်းများ:
တယ်လီနော မြန်မာ အသုံးပြုသူများ အတွက် ဝန်ဆောင်မှု (ယခု မှစ၍ ဝန်ဆောင်မှု ဟု ခေါ်တွင်ပါ) ကို ရယူပေးတဲ့ အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဝန်ဆောင်မှု ကိုရယူခြင်း အားဖြင့် 8elements လီမိတက် နှင့် အသုံးပြုသူ ကြားထဲရှိ လိုက်နာရန်စည်းကမ်း များကို လိုက်နာရမည့် အပြင် 8elements ဝန်ဆောင်မှု ၏ ဆက်စပ် ကုမ္ပဏီ နှင့် လူပုဂ္ဂိုလ် များ ၏ လိုက်နာရန်စည်းကမ်းများ အပြင် တယ်လီနော ၏ မိုဘိုင်း အသုံးပြုသူ လိုက်နာရန် များကို လည်း လိုက်နာပါမယ်
ဝန်ဆောင်မှု မှာ ဝန်ဆောင်မှုဆိုဒ် (သို့) စာတို စနစ် မှ ရယူပြီးလျှင် အပါတ်စဉ် အရစ်ကျ ပေးချေ ရသော ဝန်ဆောင်မှု ဖြစ်ပါသည်။ဝန်ဆောင်မှုကို တစ်ပါတ် ၃၁၅ ကျပ် ရယူခြင်းဖြင့် (WEB/WAP ချိတ်ဆက်ခ များအတွက် ပါဝင်ခြင်း မရှိပါ)အပါတ်စဉ် 8elements မှဖေါ်ပြသောဂိမ်း များထဲမှ ဒေါင်း လုပ်ဒ်လုပ်နိုင်ပါသည်။ သင် ဝန်ဆောင်မှုကို မရပ်ဆိုင်း ထားပါက တစ်နှစ်စာ ဝန်ဆောင်ခ ကို အပါတ်စဉ် အရစ်ကျ စနစ် ဖြင့် ဖြတ်တောက်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ဆာင်မှုများ ကဏ္ဌ အောက်ရှိ ဝန်ဆောင်မှု ကိုရပ်တန့်မယ် ကိုနှိပ်၍ အချိန်မရွေး ဝန်ဆောင်မှုကို ရပ်တန့် နိုင်ပါသည်(အနည်းဆုံး ၂ပါတ် ဝန်ဆောင်မှု ရယူထား ရန်လိုအပ်ချက် ကို သတိပြုပါ)ဝန်ဆောင်မှုကို ရပ်ဆိုင်းလိုက်သည် နှင့် ဝန်ဆောင်မှု တွင်ကျန်ရှိနေသေးသောဂိမ်းလက်မှတ်များ ရှိတော့မည် မဟုတ်ပဲ ၎င်းတို့ ကို အသုံးပြု၍ ဂိမ်းများ ဒေါင်းလုပ်ဒ်လုပ်နိုင်တော့ မည် မဟုတ်ပါ။ 8elements တွင်သင်၏ ဝန်ဆောင်မှုကို အချိန်မရွေးရပ်ဆိုင်း ပိုင်ခွင့် အပြည့်အဝ ရှိပါသည်။
ဤဝန်ဆောင်မှုသည် တယ်လီနော အသုံးပြုသူများ အတွက်သာ ဖြစ်ပါသည်။
၃. ဝန်ဆောင်မှု ကို ရယူ ခြင်း
ဝန်ဆောင်မှု ကို စတင်ဝင်ရောက်ရန် ကြော်ငြာ ၊ ဝက်ဘ်ဆိုဒ် (သို့) မိုဘိုင်းလ်ဆိုဒ် ရှိ အခုဝင်မယ် (သို့) သေချာသည် ကို နှိပ် ရပါမည်။ ထိုအခါ ပထမ တပါတ် အတွက် ၃၁၅ ကျပ်စတင်ဖြတ်တောက် မှာ ဖြစ်ပါသည်။ ပြီးလျှင် သင် ဝန်ဆောင် မှု ကို စတင် ဝင်ရောက်ပြီး သင့်ရဲ့ ပထမဆုံး ဂိမ်းကို ရွေးချယ် ဒေါင်းလုဒ် လုပ်နိုင်ပြီ ဖြစ်ပါသည်။ အပါတ်စဉ် သင့်ထံမှ ၃၁၅ ကျပ် ဖြတ်တောက်ပြီး ဂိမ်းရယူရန် လက်မှတ် တစောင်ရရှိမည် ဖြစ်ပါသည်။ သင် မရပ်ဆိုင်း သရွေ့ ဝန်ဆောင်မှု ကို ရယူထားမည်ဖြစ်ပါသည်။
၄. ဝန်ဆာင်မှု အတိအကျ
သင် ဝန်ဆောင်မှုကို ရယူထားစဉ် အတွင်း တစ်ပါတ် ကို ဂိမ်း တစ်ခု ရယူနိုင်ပါသည်။ အပါတ် စဉ် ရရှိလာသော ဂိမ်း လက်မှတ်များကို အချိန်အကန့် အသတ်မရှိစုဆောင်း ထားနိုင်ပါသည်။
အနိမ့်ဆုံး ၂ ပါတ်ဝန်ဆောင်မှု ရယူရန်သတ်မှတ်ချက်ရှိပါသည်။
ဝန်ဆောင်မှုကို ၂ပါတ် အနည်းဆုံးရယူ မထားမီ ရပ်ဆိုင်းပါက သင်၏ နံပါတ်ကို ၄ ပါတ် ပိတ်ပင်ထားမည် ဖြစ်ပြီး ၄ပါတ် ကျော်လွန် မှသာ ဝန်ဆောင်မှု ကို ပြန်လည် ရယူနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
ဝန်ဆောင်မှု ကို ရယူထားသော သင့် ထံမှ အပါတ်စဉ် ၃၁၅ ကျပ်ကို ဖုန်းဘေလ် ထဲ မှ ဖြတ်တောက်သွားမည် ဖြစ်သည်။ သင်ဟာ prepaid အသုံးပြုသူဖြစ်ပါက ဝန်ဆောင်မှု ကိုမရယူမီ ဖုန်းဘေလ်လုံလောက်ခြင်း ရှိမရှိကို စစ်ဆေးပြီးမှ ဝန်ဆောင်မှုကိုရယူပါ။
၆. ကိုယ်ပိုင် သတင်းအချက်အလက်
သင် ၏ သတင်းအချက်အလက်ကို ကြည့်ရှု၊ ပြင်ဆင်၊ ရပ်ဆိုင်း ရန် 8 Elements Ltd at Unit 618, 6/F. New Mandarin Plaza, Tower B, 14 Science Museum Road, Tsimshatsui East, Kowloon, Hong Kong SAR သို့ သင်ကိုယ်တိုင် စာပို့ ၍ လျောက်ထားခြင်း ဖြင့် ပြုလုပ်ခွင့် ရှိသည်။
ဤ အသုံးပြုသူလိုက်နာရန်စည်းကမ်းကို 8elements မှ အ ချိန်မရွေး ပြောင်းလဲပြင်ဆင်ခွင့် ရှိသည်။
၈. အသုံးပြု ဥပဒေ
ဤ ဝန်ဆောင်မှု ၏ လိုက်နာရန် စည်းကမ်းများ ကို ဟောင်ကောင် ၏ တည်ဆဲ ဉပဒေ နဲ့ အညီ ရေးထားပြီး ၎င်း ဥပဒေ ၏ကာကွယ်မှု အောက်တွင်ရှိ ပါသည်။ ဝန်ဆောင်မှု အသုံးပြုသူ သည် ဟောင်ကောင် ပြင်ပတွင် ရှိနေသော သူ ဖြစ်ပါက ၎င်း တည်ရှိနေသောရာ ၏ ဥပဒေ သည် အကျုံး မဝင်ပဲ ဟောင်ကောင် ၏ တည်ဆဲ ဥပဒေအရသာဆောင်ရွက်ရမည်ဂဖြစ်သည်။
ဝန်ဆောင်မှု နှင့် ၎င်း ၏ စာမျက်နှာ များကို ဝင်ရောက် ခြင်းအား ဖြင့် D.MAGIC ၏ ယခု ဖေါ်ပြပါ လိုက်နာရန်များဂကို သဘောတူသည့် အပြင် https://disneytermsofuse.com/ တွင် ဖေါ် ပြထားသော လိုက်နာရန် နှင့် စည်းကမ်း များအားလုံးကို ဖတ်ရှု နားလည်ပြီး သဘောတူပါသည် ဟု မှတ်ယူပါသည်။ ဤ လိုက်နာ ရန် နှင့် စည်းကမ်း များ သည် သင် ၏ အသုံးပြုမှု နှင့် ကျွနု်ပ် တို့ ၏ ဝန်ဆောင်ခြင်း ကိုစောင့်ကြပ် ပါသည်။ ယခု ဒစ်စ္စနေ ဝန်ဆောင်မှု ကို အသုံးမပြုမီ လိုက်နာ ရန် နှင့် စည်းကမ်း များ ကို ကျေးဇူးပြုပြီး သေချာဖတ်ရှုပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံ အပ်ပါသည်။